Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Sheegay In Weerarkii Suuriya Lagu Guulaystay.
Trump oo Sheegay In Weerarkii Suuriya Lagu Guulaystay.
Posted by ONA Admin	/ April 15, 2018
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qorayay ” Howlgalku si caqliyaysan ayaa loo fulayay”, ka dib markii Maraykanka, Britiain iyo Faransiisku duqeeyeen goobaha militeriga ee dalka Suuriya.
waxay beegsadeen saddex goobood oo ku yaala dimishiq iyo xomus. Madaxweynaha ayaa sheegay in weeraradu ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah. Pentagon-ka ayaa wariyeyaasha u sheegay in qorshaha hubka kiimikada uu dib u dhac badan ku keenay suuriya, iyagoo sidoo kalana sheegay in howlgalku uu ahaa mid kooban oo wax ku ool ah.
Madaxweyne Donald Trump oo ka hadlaya xilliga weerarku bilowday ayaa sheegay in la bartilmaameed sadey goobaha gaarka ah ee ay yaalaan hubka wata kiimikada iyada oo lagaga jawaabayo weerarkii loo isticmaalay hubka sunta watay ee lagu qaaday magaada Duuma todobaadkii aynu soo dhaafnay.
Dhanka kale madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa si kulul uga jawaabay weerarka, isagoo sheegay laga bilaabo haatan uu il gaar ah ku eegi doono cadawgiisa uuna iska celin doono. Waxaa uu intaasi ku daray in ree galbeedku ay sharaftoodii dhimatay.